सोमबार कोहलीले ट्वीट गर्दै पुत्री लाभ भएको जानकारी गराएका हुन्।
एजेन्सी, १३ मंसिर । बलिउडका कलाकारहरु क्याट्रिना कैफ र विक्की कौशलको विवाह पछिल्लो समयमको हट न्युज हो । कलाकार द्धयको डिसेम्बर ७ मा राजस्थानमा विवाह हुँदैछ । राजस्थानमा हुने विवाहमा को–को सहभागी हुने भारतीय क्रिक्रेटर विराट कोहली र उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा छोरी वामिकासहित विवाहमा सहभागी हुने भएका छन् । विवाहमा साहरुख खान र […]
अनुष्का र विराट चर्चामा : बालकको उपचारमा ठूलो हात
एजेन्सी। भारतीय अभिनेत्री अनुष्का शर्मा र भारतीय क्रिकेट टीमका कप्तान विराट कोहली आफ्नो राम्रो कामले गर्दा चर्चामा आएका छन्। अयांस गुप्ता नाम गरेका बालक जसलाई स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामको दुर्लभ वंशानुगत रोग लागेको थियो, उसको उपचारका लागि अनुष्का र विराटले१६ करोड रुपैयाँको इन्जेक्सनको व्यवस्था गरी सहयोग गरेका हुन्। बच्चाका अभिभावकले सामजिक सञ्जालमार्फत उनीहरुलाई धन्यवाद दिँदै यो खबर सार्वजनिक गरेका छन्।
एजेन्सी, २६ बैशाख । बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा र खेलाडी विराट कोहली सामाजिक सञ्जालमा धेरै सक्रिय छन् । आज उनीहरुले कारोना महामारीमा खटिरहेका फ्रन्टवर्कस र स्वास्थ्यकर्मीहरुको जमेर प्रंसशा गरेका छन् । अनुष्काले सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट शेयर गर्दै चुनौतिमा जुझिरहेको भन्दै प्रंसशा गरेकी हुन् । उनीहरुले देश निकै अफ्ठ्रो परस्थितिमा गुज्रिएको समयमा कोरोना भाइरसबाट सबै […]
टिम इन्डियाका क्याप्टेन विराट कोहली र उनकी श्रीमती बलिउड नायिका अनुष्का शर्मा कोभिड–१९ सँगको युद्धमा मानिसहरुको मद्दतका लागि अघि बढेका छन् । उनीहरुले यसका लागि एउटा फन्ड रेजिङ क्याम्पेनको सुरुवात गरे । यो अभियानमार्फत् विराट र अनुष्का क्राउड फन्डिङको मद्दतले ७ करोड भारु जुटाउनेछन् । यसको प्रयोग कोरोनासँग जुधिरहेका आवश्यकतामा परेका मानिसहरुका लागि गरिनेछ । विराट र अनुष्काले यसमा २ करोड भारु दान गरेका छन् । यो अभियानको नाम ‘इन दिस टुगेदर’ राखिएको छ ।अक्सिजन र स्वास्थ्य उपकरणमा हु
अनुष्का शर्मा र विराट कोहलीले पशु आश्रय केन्द्र खोल्ने
बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा र उनका पति क्रिकेटर विराट कोहली दुवै पशुप्रेमी हुन् । अनुष्काले पशु सुरक्षाका विषयमा कुरा उठाउने गरेकी छन् र पशुअधिकारको पैरवी गर्ने गरेकी छन् । उनले छाडा पशुहरूको आश्रयस्थल मुम्बईको काँठ क्षेत्रमा खोल्ने भएकी छन् । विराट कोहलीले पत्नीको इच्छाबमोजिम मुम्बईमा पशु कल्याण परियोजना सञ्चा...
विराट र अनुष्काकी छोरीको पहिलो फोटोले इन्टरनेटमा माया पाउँदै
मुम्बई । अभिनेत्री अनुष्का शर्मा र क्रिकेटर विराट कोहली एक छोरीका माता–पिता बनेका छन् । अनुष्काले सोमबार
विराट–अनुस्का बने बाबु–आमा
भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली र अभिनेत्री अनुष्का शर्मा बाबु–आमा बनेका छन् । सोमबार अनुष्काले छोरी जन्माएकी हुन् ।
'यो महामारी हाम्रो लागि आशीर्वाद नै भयो'
बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा र विराट कोहली अब छिट्टैनै आमा–बुवा बन्ने तयारीमा छन्। अनुष्का आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा आफ्नो बेबी बम्पसहितको तस्बिर सेयर गरिरहेकी छिन्।
विरुष्का अर्थात अनुष्का शर्मा र विराट कोहली । यो हिट जोडीलाई मिडियाले जहाँपनि पच्छ्याइरहेकै हुन्छ । उनीहरु के गर्छन्, कहाँ जान्छन्, के भन्छन् ? यसबारे चियोचर्चा गरिन्छ । देशमा होस् वा विदेशमा उनीहरु चर्चाको घेराबाट …
अनलाइनखबर जेष्ठ २०७६
इटलीमा विवाह गरेर देशद्रोही भए अनुष्का र विराट कोहली !
अभिनेत्री अनुष्का शर्मा र क्रिकेटर विराट कोहली इटलीमा विवाह गरेर 'विरुष्का' बनिसकेका छन् । विराट र अनुष्काले बिहे भारतबाट निकै टाढा इटलीमा भयो । यसलाई लिएर दुबैका आफन्तले नरमाइलो माने तर, मध्य प्रदेशका भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य समेत केहीलाई निकै नरम्रो लागेछ । 'स्किल इण्डिया' का एक कार्यक्रममा पन्नालालले भनेका छन्, 'विवाह …